Република България (ဘူဂေးရီးယား)
Съединението прави силата (ဘူဂေးရီးယား)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Мила Родино (ဘူဂေးရီးယား)
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်)
42°41′N 23°19′E﻿ / ﻿42.683°N 23.317°E﻿ / 42.683; 23.317ကိုဩဒိနိတ်: 42°41′N 23°19′E﻿ / ﻿42.683°N 23.317°E﻿ / 42.683; 23.317
၀.၇% အခြား[note ၁]
—၅၉.၅% ဘူလ်ဂေးရီးယား အော်သိုဒေါ့
• ပထမ ဘူလ်ဂေးရီးယားအင်ပါယာ
• ဒုတိယ ဘူလ်ဂေးရီးယားအင်ပါယာ
• ဘူလ်ဂေးရီးယား ပဒေသရာဇ်နယ်
၁၈၇၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃ ရက်
၁၉၀၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်
• လက်ရှိနိုင်ငံ တည်ထောင်ခြင်း
၁၉၉၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်
၁၁၀,၉၉၃.၆ km2 (၄၂,၈၅၄.၉ sq mi) (အဆင့်: ၁၀၃)
• ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ခန့်မှန်း
၆,၈၇၅,၀၄၀ (အဆင့် - ၁၀၆)
၆၃/km2 (၁၆၃.၂/sq mi) (အဆင့် - ၁၂၀)
$၁၇၄.၉၉၈ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၇၃)
$၂၅,၄၇၁ (အဆင့် - ၅၅)
$၇၇.၇၈၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၆၈)
$၁၁,၃၂၁ (အဆင့် - ၆၁)
အရှေ့ဘက်တွင် ပင်လယ်နက်၊ တောင်ဘက်တွင် ဂရိနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံ အနောက်ဘက်တွင် ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံနှင့် မြောက်ဘက်တွင် ရူမေးနီးယားနိုင်ငံတို့ဖြင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ ရူမေးနီးယားနိုင်ငံနှင့် ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံကြားတွင် ဒန်ညုမြစ်က နယ်နိမိတ်သဖွယ် စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသည် ၄၂၈၁၀ စတုရန်းမိုင်ကျယ်ဝန်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအကျယ်အဝန်း၏ ၆ ပုံ ၁ ပုံ နီးနီးသာ ရှိသည်။ ခရစ်နှစ် ၆၀၀ ကျော်ခန့်က ယင်းဒေသတွင် လာရောက်နေထိုင်ကြသော တာတာလူမျိုးအနွယ် ဗူလဂါး လူမျိုးတို့အား အစွဲပြု၍ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံဟုတွင်သည်။ ယခုအခါ ယင်းနိုင်ငံကို ဘူလ်ဂေးရီးယား ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်ဟုခေါ်ကြသည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ မြေမျက်နှာပြင်ကို ၄ ပိုင်းခွဲခြားထားနိုင်သည်။ မြောက်ပိုင်းတွင် ဒန်းညုမြစ် စီးဆင်းရာ ဒန်းညုမြစ်ဒေသ၊ အလယ်ပိုင်းတွင် ဘော်လကန်တောင်တန်းဒေသနှင့် တောင်ပိုင်းတွင် လွင်ပြင်ခေါ် မရစ်ဆမြစ်ဝှမ်းဒေသ၊ တောင်ပိုင်းတွင် ရော့ဒိုပဲ တောင်တန်းဒေသတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဗော်လကန်တောင်တန်းနှင့် ရော့ဒိုပဲတောင်တန်းတို့သည် အရှေ့မှ အနောက်သို့တန်းနေကြသည်။ ဘော်လကန်တောင်တန်း၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ်သည် အနောက်နှင့် အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိ၍ ပေ ၁၀၀၀ ကျော်မြင့်သည်။ ရော့ဒိုပဲ တောင်တန်း၏ အမြင့်ဆုံးတောင်ထွတ် မူဆာလာသည် ၉၅၉၅ ပေမြင့်သည်။ ပေ ၄၅၀၀ အထက်တောင်ကုန်းဒေသတွင် ထင်းရှူးနှင့် ဝက်သစ်ချပင်များ ပေါက်သော သစ်တောများရှိသည်။ ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ ထင်းရှားသော မြစ်ကြီးများမှာ ဒန်းညုမြစ်၊ မရစ်ဆမြစ်၊ တွန်ဒစာမြစ်၊ ယန်တြာမြစ်၊ အစ္စတာမြစ်၊ ကမ္မချိယမြစ်နှင့် အော့စမာမြစ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ များစွာသော မြစ်ငယ်များ၊ ချောက်ငယ်များတို့ကား ဒန်းညုမြစ်နှင့် မရဆစ်မြစ်တို့ထဲ့သို့ စီးဝင်ကြသည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတွင် တောင်ကြားရေအိုင်ကလေးများမှ အပ ထင်ရှားသော ရေအိုင်ကြီးများ မရှိချေ။
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသည် မြေဩဇာကောင်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေး ဖြစ်ထွန်းသည်။ ထင်ရှားသော လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များမှာ ဂျုံ၊ ရိုင်းဂျုံ၊ မုယော စသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ဆေးရွက်၊ သစ်သီးများနှင့် ဝါဂွမ်းတို့ဖြစ်သည်။ ကျောက်မီးသွေား၊ ခဲ၊ သွပ်၊ အလျူမီနီယမ်နှင့် ကြေးနီစသော သတ္ထုတွင်းများလည်း ထွက်သည်။ ဘော်လကန်တောင်တန်းဒေသများနှင့် အနောက်တောင်ဘက်ရှိ တောင်တန်းများတွင် ရေပူစမ်းနှင့် ဆေးစမ်းများရှိသည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ် သန်းကောင်စာရင်းအရ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ၏ လူဦးရေသည် ၇, ၆၂၉, ၂၅၄ ယောက်ရှိသည်။ ယင်းတို့အနက် ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဘူလ်ဂေးရီးယန်း လူမျိုးများဖြစ်၍ ၆ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် တူရကီလူမျိုးများ ဖြစ်ပြီးလျှင် ကျန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဂျစ်ပဆီနှင့် အခြားလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘူဂေးရီးယန်း လူမျိုးဟူသည်မှာ ဗူလဂါး လူမျိုးနှင့် ဆလဗ လူမျိုးတို့ သွေးနှော၍ ပေါက်ဖွားလာသော လူမျိုးဖြစ်သည်။
၈၉၄ ခုနှစ်မှ ၁၂၈၀ပြည့်နှစ်အတွင်း ဘူလ်ဂေးရီးယန်းလူမျိုးတို့သည် ဘော်လကန်ကျွန်းဆွယ် ဒေသများစွာကို ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၃၆၉ ခုနှစ်တွင် အော်တိုမန်တူရကီနိုင်ငံက ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကာ ဘူလ်ဂေးရီးယား အင်ပါယာကြီးကို ဖြိုခွင်းပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၁၈၇၆ ခုနှစ်တွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတို့သည် ‌ေ‌ေ‌ေ‌ေရကီအစိုးရအား တော်လှန်ကြရာ တူရကီတို့က ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဖိနိုပ်ချေမှုန်းကြသည်။ ဘော်လကန် ကျွန်းဆွယ်တွင် လက်ဝါးကြီးအုပ်ချင်နေသော ရုရှတို့က တူရကီတို့၏ ရက်စက်မှုကြီးကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ ဘူဂေးရီးယန်းတို့ဖက်မှ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ပေးသဖြင့် အနိုင်ရကာ ဆန်စတက်ဖန်နို စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြသည်။ ယင်းစာချုပ်အရ မက်ဆိုဒိုးနီးယားနှင့် တူရကီပိုင် ဥရောပနယ်မြေအားလုံးလိုလိုအပြင်၊ ယခုလက်ရှိ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံတို့ကို ပေါင်း၍ ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံဟူ၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဥရောပ တန်ခိုးကြီးနိုင်ငံများက ယင်းအစီအစဉ်ကို သဘောမကျသဖြင့် ၁၈၇၈ ခုနှစ်တွင် ဘာလင်မြို့၌ ကျင်းပသော ညီလာခံကြီးတွင် ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းအား တူရကီအစိုးရ၏ အထိန်းအသိမ်းခံ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းပြည်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေး၍ ဘူလ်ဂေ:ရီးယား တောင်ပိုင်းနှင့် မက်ဆိုဒိုးနီးယားတို့ကို တူရကီနိုင်ငံသို့ ပြန်ပေးလိုက်သည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် ဘူဂေးရီးနိုင်ငံသည် တူရကီနိုင်ငံအောက်မှ ရုန်းထွက်ကာ လုံးဝ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံအဖြစ် ကြေညာသည်။ ၁၈၈၇ ခုနှစ်မှစ၍ ဘူဂေးရီးယားကို အပိုင်စားရသော မင်းသား ဖာဒီနန်သည် ဇာဘုရင်ဘွဲ့ကို ခံယူလိုက်သည်။
ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် လျှပ်စစ် ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းကို လေအားမှ ထုတ်ယူရန် စီစဉ်လျက် ရှိ
↑ The official number of Romani citizens may be lower than the actual number.
↑ Constitution of the Republic of Bulgaria။
↑ Население по местоживеене, възраст и вероизповедание။
↑ Penin၊ Rumen (2007)။ Природна география на България [Natural Geography of Bulgaria] (ဘူလ်ဂေးရီးယားဘာသာစကားဖြင့်)။ Bulvest 2000။ p. 18။ ISBN 978-954-18-0546-6။
↑ Field listing: Area။ Central Intelligence Agency။ 31 January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Population and Demographic Processes in 2019 | National statistical institute။ 18 June 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ World Economic Outlook Database, April 2021။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
Chief of State and Cabinet Members Archived 26 October 2009 at the Wayback Machine.
Catalog of modern Bulgarian artists Archived 14 August 2012 at the Wayback Machine.
Bulgaria fine arts gallery Archived 26 January 2021 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံ&oldid=725870" မှ ရယူရန်
CS1 uses ဘူလ်ဂေးရီးယား-language script (bg)
CS1 ဘူလ်ဂေးရီးယား-ဘာသာစကား ရင်းမြစ်များ (bg)
ဘူဂေးရီးယားဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။